I-Atopic Dermatitis - Ipulatifomu Yesiguli Yesiyaluyalu Yomhlaba Wonke Nomoya
I-Atopic DermatitisIpulatifomu Yesiguli Yomhlaba Wonke Nesifo Somoya2021-07-01T12:44:54+02:00
I-Atopic Dermatitis, ebizwa nangokuthi yi-Eczema
Uma wena noma ingane yakho wake waba ne-eczema (Atopic Dermatitis) evuthayo, ujwayelene nesikhumba esivuvukile, somile, esiqinile futhi sihlale sinwaya kakhulu futhi sinwaya. Ngenhlanhla kunezindlela zokunciphisa izimpawu.
Kulinganiselwa ukuthi amaphesenti angama-30 abantu base-US aba nezimpawu ze-Atopic Dermatitis, ngokusho kweNational Institutes of Allergy and Infectious Diseases, kodwa lesi sifo sesikhumba sivame kakhulu ezinganeni. Izimpawu zivame ukuqala eminyakeni emihlanu yokuqala yokuphila, imvamisa izinyanga eziyisithupha zokuqala. Ngokuhamba kwesikhathi nokwelashwa, njengoba izingane zivuthwa, i-eczema ivame ukuhamba - kepha kwesinye isikhathi iyaqhubeka nokuba mdala.
Izici eziningi ezahlukahlukene zifaka isandla kwi-eczema kufaka phakathi ukudla kanye ne-allergen yezemvelo, ukoma ngokweqile kwesikhumba, ukulimala ekuklwebheni, nokuvuvukala kwamagciwane esikhunjeni. Ukukhuluma ngakunye kubalulekile ekulawuleni isimo.
I-Eczema ne-Allergen yokudla
Yize i-eczema singesona isifo esingezwani neze, i-allergen ingadlala indima. Phakathi kwezinsana nezinsana ezine-eczema elinganiselayo kuya kokubi kakhulu, kuvame ukuba yi-allergen yokudla.
Ukungezwani komzimba okuvame kakhulu e-United States ubisi lwenkomo, iqanda, ukolweni, isoya, amakinati, amantongomane ezihlahla kanye nokudla kwasolwandle. Uma ucabanga ukuthi kungenzeka ingane yakho ibe nayo ukudla kokudla, bheka i-allergist eqinisekiswe yibhodi ukuthola ukuxilongwa okunembile ngaphambi kokususa noma yikuphi ukudla ekudleni kwengane yakho.
Okuvamile endlini ama-allergen okuthinta i-eczema kufaka izibungu zothuli ne-pet dander. Ukunciphisa ukuvezwa kwezintuli, faka imicamelo kanye nomatilasi ngezembozo zothuli, ugeze amalineni masonto onke emanzini ashisayo, uhlanza nge-HEPA (ukusebenza kahle kakhulu komoya), futhi wehlise umswakama wasendlini ube ngamaphesenti angama-40-50, njengoba izibungu zothuli zidinga umswakama ukuze phila.
Azikho izinyathelo ezinganciphisa ngempumelelo i-petander uma isilwane sihlala ekhaya, kepha kuzosiza ukugcina izilwane ezifuywayo zingaphandle kwamakamelo okulala kanye nefenisha noma omata lapho izingane zilala khona noma zidlala khona. I-pet dander iqongelela othulini lwendlu, ngakho-ke sebenzisa ama-vacuum we-HEPA ukuyigcina iphansi. Lapho konke okunye kwehluleka, ukuthola ikhaya elisha lesilwane kungaba yindlela kuphela.
Ukuvimbela Isikhumba Esomile
Isikhumba sezingane ezine-eczema soma ngokushesha okukhulu kunesikhumba esinempilo, ngakho-ke kubalulekile ukusigcina sinamanzi amaningi.
Odokotela bavame ukuncoma indlela "yokucwilisa neyokuvala" - hlalisa ingane kubhavu wamanzi asivivi imizuzu eyi-15 ukuze amanzi angene, bese uxukuza amanzi amaningi noma ubambe kancane ithawula bese ugcoba ngokushesha uthambisa endaweni ejiyile ungqimba. Faka isicelo sokuthambisa kaningi. I-National Eczema Association incoma amafutha okuthambisa, esikhundleni sokugcoba noma okhilimu.
Imithi yokwenziwa ngezihloko ze-Corticosteroid
Izingane eziningi zidinga ukugcotshwa kwesikhumba kwama-topical corticosteroid noma okhilimu ukulawula ngokuphelele i-eczema yazo. Lokhu kuza ngamandla amaningi, ngakho-ke buza udokotela wakho ukuthi yikuphi imithi nokwelashwa izinketho zilungele ingane yakho.
Ukulawula ukulunywa kubalulekile: Lapho ingane iklwebha isikhumba, kulapho i-eczema iba kubi kakhulu futhi nezimpawu zingaphuma zingalawuleki. Ama-antihistamine e-over-the-counter angasiza ukususa unqenqema futhi avumele ukulala okungcono ebusuku. Abanye abazali bathola ukugoqa izindwangu ezimanzi esikhunjeni esithintekile kunciphisa ukulunywa bese kuyeka ukunwaya.
Uma i-eczema yengane yakho ihlala ilawulwa ngendlela engafanele, thintana ne-allergist yakho eqinisekiswe yibhodi ukuthola ezinye izindlela zokwelashwa.
Ikhishwe kusuka Ukungezwani komzimba ne-Asthma Namuhla i- “Eczema and Allergies” kaJohn Lee, MD, umqondisi womtholampilo we-Food Allergy Program eBoston Children's Hospital.
Ezinye Izinsizakusebenza ze-Atopic Dermatitis:
Ukuqonda i-Atopic Dermatitis